décembre 2018 – filazantsaramada
NAMPITENENANA TAMINTSIKA NY ZANAKA
« Dia amin’izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny Zanany, izay voatendry ho Mpandova ny zavatra rehetra; Izy no nahariana izao tontolo izao. » (Hebreo 1:2) Nampitenenan’Andriamanitra tamin’ny zanak’Isiraely i Mosesy fony izy ireo nentina niala tany Egypta. Toy izany koa, nampitenenan’Andriamanitra taminy i Jeremia rehefa fony izy ireo niatrika ny fahababoana; amin’izao andro farany […]
Publié parfilazantsaramada décembre 21, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur NAMPITENENANA TAMINTSIKA NY ZANAKA
MPANJAKA MITADY FIHAVANANA
« Lazao amin’ny Ziona zanakavavy: Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa ». Matio 21:5 Ny fiavian’i Jesosy eto amin’ity izao tontolo izao ity dia azo sokajiana ho roa: Ny voalohany dia Ilay Jesosy Zanak’Andriamanitra velona, Ilay Teny tonga nofo, naterak’i Maria tao an-tranonomby, Ilay Andriamanitra amintsika, niara-nonina […]
Publié parfilazantsaramada décembre 14, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MPANJAKA MITADY FIHAVANANA
AKAIKY NY FAMONJENA ANTSIKA
« Fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » (Romana 13:11b) Ny famonjena dia fanalana antsika ho afaka amin’ny loza. Ny loza dia ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena araka izany dia asan’Andriamanitra miaro sy manala antsika amin’ny fahaverezana mandrakizay. Ny famonjena ankehitriny dia ny fananana ny ràn’i Jesosy manaisotra ny fahotana, […]
Publié parfilazantsaramada décembre 7, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur AKAIKY NY FAMONJENA ANTSIKA